Beeraha & Beeraleyda Puntland: Sookabashada Beeraha iyo Dalagyada Beeraleyda Puntland (dhegayso) – Radio Daljir
Beeraha & Beeraleyda Puntland: Sookabashada Beeraha iyo Dalagyada Beeraleyda Puntland (dhegayso)
Siteenbar 29, 2017 2:45 b 1
Sida aad aad la socoteen dhegaystayaal waxa aad dhegaysateen maalmihii la la soo dhaafay warbixino taxane ah oo ku saabsan xaalka beeraha iyo beeraleyda Puntland. Warbixinada waxaan ku iftiiminay dhibaatada beeraleyda Puntland ay kala kulmeen siirar (miro/seeds) ay qaybiyeen qaar kamid ah hay’adaha ka howlagala gobolada Puntland.
Hadaba sidee bay uga soo kaban karaan dhibtaas beeraha iyo beeroleyda Puntland, loona hormarin karaa waxsoosaarka beeraha? Waa se maxay doorka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Puntland?
Su’aalahaasi iyo kuwo kale waxaan hordhignay aqoonyahan cQaadir Cali Samatar oo ah xeeldheere beeraha iyo abuurka beeraha.
Maqaalo Kale 174 Wararka 11552
Senetor Cabdi Qeybdiid oo Ka Hadlay Khilaafka Galmudug iyo Dulimaadyadda Cidda Masuulka ka ah
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﻜﺎﺷﺔ 1 year
barnaamijkii ugu fiicnaa eee ideecad siidayso inta aragtidyda hambalyo radio Daljir hurry u sir socda